Ukwakha Imidwebo Yezinja Ukuze Uthembeke Ku-Bowser Yeqiniso
UDavidBridburg September 2, 2020 Mashi 23, 2021
4 Imidwebo Yezinja Ehlanyayo? Cha, Fido On Mediums Sithanda Namuhla
Kungani sixubekile ekusebenziseni izindlela ezintsha? Hhayi lokho akucaci kangako. Uzodinga ukusibuza ngamunye. Lapha nginemisebenzi embalwa njengesithombe sedijithali, ukubaza, nezicucu ezimbili zedijithali zomsebenzi wami.
Lezi izithombe zenja ezijabule kakhulu. Impumuzo yobuciko evela ezweni lethu le-Covid 19.
Ngithengisa kuphela umsebenzi wami wobuciko ongezansi njengamaphosta nokuphrinta kwendwangu.
I-Instagram ingeyethu noma kubaduni bethu. Isethulo ukubukeka okuhle kakhulu kobuchwepheshe. Wonke umuntu ufuna izithombe zakho zesilwane. Beginner noma uchwepheshe inja yakho izithombe rule.
UTakashi Murakami usebenzisa izimbali zakuqala zama-1970 ngobuso obujabulile njengesisusa sakhe. Khuluma ngokuthuthuka. Awuboni umsebenzi womculi kusuka ezithombeni zakhe zomgwaqo zikaPom umdlwane wakhe. EzikaTakashi Instagram feed inokuningi kwalesi bowzer (hhayi ngokoqobo uhlobo lokuwela).
UTakashi Murakami unendlela ethokozisayo yokubona injabulo. Isidingo somuntu siqu noma ofisa ukudweba umhlaba abanye abangasiqonda futhi basithokozele.
UJeff Koons kungenzeka abe ngumculi ophilayo owaziwa kakhulu. Uma ungakaze uzwe ngaye, ake ngikwazise. IBalloon Dog (Olubomvu) yisithombe esizinyawo ezingama-20. IKoons ivuza imizwa yakho yezohwebo. Manje abanye bahlekisa ngomsebenzi wakhe ngalokho nje. UJeff uyigumbi lama-echo elihlala likhula njalo ngezihloko zakhe. Kuthathwa njengabaculi abaqoqeka kakhulu (lokho kuya ngesikhwama semali sakho), umsebenzi wakhe uboniswa obala kuwo wonke umhlaba wobuciko obuhle.
I-Balloon Dog Red nguJeff Koons
IJeff's Balloon Dog (i-Orange) ithengiswe ekwindla ka-2013 nge $ 58.4 million. Ukusetha irekhodi ngaleso sikhathi somculi ophilayo. Izindaba zemboni kaKoons, umculi uqobo nomsebenzi wakhe ziyinganekwane.
Izithombe zikaTakashi Murakami noJeff Koons azithengiswa yimina. Ukusetshenziswa okulinganiselwe kwamagama abo nezithombe ezimbili kungaphansi kokusetshenziswa okulungile.
Imidwebo Yezinja Yedijithali
Ngabe uyakubheka ukusebenzisa kwami ​​amathuluzi edijithali ukudweba? Angiyona i-purist. Vele lokho akuhloselwe ukuzamazamisa isikebhe. Ngempela. Amathumbu ami angitshela ukuthi ngibe phambili kuwe. Ngiyazithanda izinja, futhi bekufanele ngisebenzise amathuluzi ami ku-fido.
UFido uqhamuka esiLatin esithi "to trust or confide in". Impela uma ungeke uthembe injana yakho, ungathembela kubani?
Amanothi Omculo 6 kaDavid Bridburg
Uma uthanda izinja, isizathu sokuthi ungene kulo okuthunyelwe kwebhulogi, kufanele uthande ilebhu. Nginake kakhulu iso lakhe. Ungachofoza esithombeni ukuze ubuke kangcono.
Amanothi Omculo 34 kaDavid Bridburg
Ungumuntu weRottweiler noma ungeyena. Asikho isidingo sokukuqinisekisa, noma ayikho indlela yokukuqinisekisa. Nginendawo ethambile enhliziyweni yami yalokhu kubola. Nakulokhu iso kulokhu lenziwe ngokucophelela. Lesi silwane sibukhali futhi sicacile, sinokuzethemba okukhulu, umgijimi.
Manje lokhu kungakushaya ngokwehlukile, ngigcina izithombe zami zezilwane ku- Thumela iqoqo lesimanje. Iqoqo lakhiwa ngemuva kweqoqo lami le-Contemporary, elichazwa ngokuthi isihloko siba yinto. Cabanga ngezinja zeJeff Koons 'Balloon.
Le yindlela engingenisa ngayo iqoqo:
“Amanothi omculo afana nempilo ayindlala. Uyabona eqoqweni lami langaphambilini leContemporary Collection, ngiphinda izihloko njengezinto. Kuleli qoqo, i-Post Contemporary Collection, ngixuba impilo ngibuyele ezintweni. Izilwane zivame ukuphikiswa futhi zenziwe ubuntu zenze isihloko esiphelele. ”
UDavid Bridburg, umbhali webhulogi
Ubudlelwano besimanjemanje ne-fido busendaweni ethile lapho. I-canine ingaphila isikhathi eside kakhulu ekhaya lakho kunasendle. Siyawathanda amantshontsho.
Isengezo: Canine, Wolf, Fox, noRottweiler
Ngibonga abantu ababili abaziyo umsebenzi wami wobuciko. Bobabili abafunda le ndatshana bathe, engeza eminye imininingwane ukuze ufunde futhi ungeze ezinye izithombe zakho ze-canine. Umama uphikelela ukuthi kuningi engizokunikeza abafundi bami. Umqoqi wangibhalela ethi akaboni ukuphrinta impisi okwakungokwakhe kuxoxwa ngakho.
Ngizizwa ngikhuthazekile kakhulu, ngiyabuya ukubuyekeza lokhu okuthunyelwe. Ngizoshiya isiphetho sami esilula ekugcineni singashintshiwe.
Impisi iyi-canine yethu yokuqala
Mhlawumbe unentshisekelo kulezi zinguqulo ezimbili zesithombe sempisi. Le ndlela iyindlela eyingqayizivele. Ngeke nginikeze imfihlo yami yokuhweba encane.
Isimo sokuqala salesi sithombe sikhanya futhi sikhanya.
Amanothi Omculo 21 kaDavid Bridburg
Uyimpisi ebukeka kahle. Ungasibona isimilo sakhe, ngenjabulo ehlose okuthile endaweni yakhe. Inja ngaphakathi ikhona. Njengamakhala nezindlebe.
Izimpendulo zakho zihlukaniswe phakathi kwalezi zithombe ezimbili. Ukushiya esikhaleni esimhlophe ngobuciko kuyajabulisa. Isakhiwo sesithombe siqine kangako.
Uhlobo lwesibili belufanelekile ngoba uboya obuluhlaza buyisici sempisi.
Amanothi Omculo 36 kaDavid Bridburg
Ushintsho olulodwa kumbala ongeziwe lwakha impisi ekuzingeleni. Uzimisele ngokuthile okuhle. Njengenja elandela ingwejeje.
Ngithatha inkululeko, ngingeze imibala ehlukahlukene ku-fox yami. Ungahle uthande lokhu. Impungushe egijima uthango umbono esiwujabulelayo thina bantu ngokweqiniso. Inhlansi yenkululeko yemvelo.
Amanothi Omculo 37 kaDavid Bridburg
Yini ehehayo ngalesi sithombe sempungushe? Uzoyibona, uma ngithi.
Impungushe endaweni yakini ayikaze ikuvumele usondele. Uma ufana nabaningi bethu. Lokhu kusondela kunamandla ngenxa yalokho. Uba yingxenye yemvelo.
Impungushe yami ithole impendulo efudumele kakhulu evela kubantu abaningi. Njengomculi, ngiyakwazisa lokho kakhulu. Singabaculi sidalulwa ngezikhathi ezithile.
URottweiler uhlobo olukhetheke kakhulu
Eminyakeni engamashumi amabili edlule, umngane wami othandekayo wangazisa kuRottweiler wakhe. Igama lakhe kwakunguPorkie. I-rottie enkulu yesilisa, uPorkie wayeyinja yokutakula. Umngani wami wayehleba inja. Isimo saseConnecticut besimubeke kuye, sisindisa impilo yakhe.
UPorkie wayethukuthele kakhulu lapho emthola. Wayehlukunyezwe kabi kakhulu. Ngesonto lokuqala esemzini wakhe, wathi kumngani wakhe, "Angikwazi ukukwenza". Ngesonto lesibili, wayengakaze abe nenja ethembekile.
Angathi, ayikho inja efana neRottweiler. Uhlobo lwakhe lunayo yonke imisebenzi. Uyinja esebenza ngezindlela eziningi kakhulu.
Le yinguqulo yesibili yesithombe seRottweiler.
Amanothi Omculo 33 kaDavid Bridburg
Impilo inezikhathi zayo ezinhle nezimbi. Ngingubani mina ukukutshela lokho? Wazi kahle. UPorkie wadlula, futhi umngani wami omkhulu wadlula enenhliziyo ephukile eminyakeni emibili kamuva. Ngenkathi ngidabukile ngaleso sikhathi, ngibheka emuva ngezinkumbulo ezimnandi.
Ngesikhathi sakhe sokuqala, uPorkie wayengomunye wabadlali abakhulu kunabo bonke engake ngabazi. Bobabili babenezinhliziyo ezinkulu kakhulu.
Lokho kuphawula kokugcina kuyisiphetho sangempela kimi uqobo. Njengoba ngishilo phezulu ngalesi sibuyekezo ngeke ngishintshe isiphetho sokuqala. Ngaphandle kokushintsha igama eliholayo lisuke kokuthi “izinja” liye ku- “canines”.
AmaCanines njengendaba yobuciko obuhle abelokhu ekhona unomphela. Inqobo nje uma kade sikhona. Amasu amasha avuselela.
Chofoza kunoma yisiphi isithombe sokuthanda kwakho ukubona ikhasi lokuthengisa isithombe kuwebhusayithi yami (ubuciko bami kuphela, akusebenzi ukumboza isithombe phezulu).
Umbuzo: Abaculi besikhathi samanje bazithanda kanjani izinja? Ake ngibale izindlela. Ngokuzimisela, izindlela ezintsha ezintsha ziyaheha.
Ubuciko obuhle baseMelika ukuthanda: Imibono emithathu yokuziqhenya